China Class 1 kilasy 0 fantsom-baravarankara vita amin'ny fantsom-panafody plastika | CESE2
Fahombiazana avo lenta amin'ny afo
Teknolojia nano micro foam manana fananana, fitarihana hafanana ambany
Miloko vita amin'ny fehin-kibo sy plastika miaro tanteraka ny teknolojia nano micro foaming fananana, ka ny fananganana anatiny ny rafitra kitapo rivotra kely; Ny rafitra anatiny miboiboika mihidy tanteraka, ka ny fitarihana hafanana dia ambany sy milamina kokoa, miharihary ny fampiasana maharitra ny fitsinjovana angovo.
Fahasalamana ara-tontolo iainana, kalitaon'ny rivotra anaty trano tsara kokoa
Tsy misy poizina, tsy misy fofona, tsy misy fibre, tsy misy vovoka, tsy misy formaldehyde, cyanide ary akora hafa manimba, ambany fifantohana amin'ny volatilization organika, hahazoana antoka ny kalitaon'ny rivotra anaty trano.
Fisehoana ambony, fanamiana ary tsara tarehy
Ny fehikibo vita amin'ny fingotra sy plastika miloko dia misy loko maro, endrika tsara tarehy ary tsy mila haingo. Ankoatr'izay, ny loko isan-karazany dia azo ampiasaina mba hahatsapany ny fitantanana maso amin'ny faritra samihafa ary hanatsara ny vokatr'ilay tetikasa.
Mora sy haingana ny fametrahana
Fitaovana malefaka, loko namboarina, fananganana tsotra sy fametrahana.
Famantarana ny zava-bita
Density maneho hevitra
Hakitroky ny setroka
Kilasy B1 mijanona amin'ny lelafo, kilasy A tsy mora may A.
-20 ℃时F0.030 WI (mk)
Ny fanoherana ny hamandoana
Fitrohana rano vakum
≥7N / sm
Tahan'ny fihenan'ny famatrarana (tahan'ny famatrarana 50%, 72h)
Fanoherana ny fahanterana, 150h
Miketrona kely, tsy misy triatra, tsy misy lavaka, tsy misy fihoarana
Ny mari-pana azo ampiharina
Previous: 18W 40W 80W nitentina jiro LED SMD madio ho an'ny efitrano madio
Manaraka: 70W 100W 150W voltaka lehibe LED jiro tetikasa-jiro
Fitaovana fanamafisam-bava vita amin'ny fingotra
coil vy nanakodia mangatsiaka mangatsiaka nanakodia feno st ...
>> Famaritana ny coil Steel Rolled Steel Coil (CRC) COIL ROLLED STEEL COIL dia novokarin'ny coil mafana nanakodia sy nanakodia azy nitovy tamin'ny maripana nalaina ho an'ny hateviny manify. Izy io dia manana fikirakirana avo lenta sy toetra mekanika tena tsara ampiasaina amin'ny famokarana fitaovana elektronika sy fiara. Famaritana mahazatra JIS G 3141: 2005 SPCCT-SD SPCD-SD, SPCE-SD, SPCF-SD, SPCG-SD ASTM A1008 CS TYPE A / B / C DS TYPE A / B, DDS EDDS EN ...
coil vy manohitra ny rantsan-tànana GL ho an'ny tafo ...
55% AL-ZN COATED STEEL COIL dia substrate vy mifono amin'ny andaniny roa miaraka amin'ny alimina aluminium-zinc miaraka amina firakotra, 55% aluminium, zinc 43,4% ary silika 1,6%. Ny fanoherana ny harafesina tsara an'ny Aluzinc dia vokatry ny fananan'ny akora metaly roa: ny vokan'ny sakana misy ny aliminioma misy ambonin'ny fonosana sy ny fiarovana ny zinc. Haavo matevina 0.14 mm - 2.00 mm Sakany Sakany 600 mm - 1250 mm ...
Ny fantsom-pifaninanana PVC dia be mpampiasa amin'ny tranobe indostrialy sy sivily, ao anatin'izany ny fivoahan'ny varavarana anatiny sy ivelany, ny tetikasa fantsom-pako, ny rafitra fanondrahana fambolena, ny lakan-drano simika, ny rano maloto, mety ihany koa amin'ny fantson-drivotra sy ny fantsom-pivoahan'ny rano, sns. apron) S 、 SDR savaivony ivelany (mm) hatevin'ny rindrina (mm) tsindry anarana 0.63MPa S16 SDR33 63 2.0 75 2.3 90 2.8 S20 SDR41 110 2.7 125 3.1 140 3.5 160 ...
ANGLE STEEL dia mety ho an'ny filan'ny fahasamihafana isan-karazany arakaraka ny rafitra, azo ampiasaina amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny singa. Ampiasaina amin'ny endriny maritrano sy injeniera marobe, toy ny andry, tetezana, tilikambo fitaterana, fananganana sy fampitaovana milina, sambo, kaontenera, lafaoro indostrialy, tilikambo fanehoan-kevitra, fonosana tariby, fantson-kery, fantsom-bisy ary bara fitahirizana sns. Fitaovana voajoro vy ampiasaina amin'ny fanaovana tahiry r ...
FLAT BAR dia ilay vy izay manana zoro mahitsizoro sy sisiny somary mahia. Mety ho ny vy vita. Azo ampiasaina ihany koa ny fantsom-bozaka vita amin'ny fantsom-bozaka sy ny fonosana mihodina miaraka amin'ny takelaka manify, azo ampiasaina izy io hanangonana vy, fitaovana ary kojakoja mekanika, ao amin'ny maritrano ampiasaina handrafetana ny firafitry ny ondrilahy, ny tohatra sy ny maro hafa raha vita vy. Fonosana amina fonosana na toy ny zavatra takian'ny mpanjifa Mamatotra lanja manodidina ny 2 taonina MOQ 2 taonina isaky ny haben'ny Fotoana fandefasana 15-20 andro aorian'ny nahazoana ...
fireproof azo fehezina mafana insulate fitaratra w ...
Ny volon'ondry vera sentrifugal dia fitaovana maloto vita amin'ny vera vera vita amin'ny fofona vita amin'ny empira ary nofafazana tamina resina thermosetting, ary avy eo dia nosedraina sy fanodinana lalina, izay azo namboarina ho andiana vokatra misy fampiasa maro, toy ny landihazo Cotton tabilao, fantsona fiberglass, tabilao fanamafisam-peo, volon'ondry fitaratra avo lenta, sns. >> Fanatanterahana sy fenitra ny vokatra: insitation 1.Thermal, fidiran'ny feo ary fihenan'ny tabataba 2. St Thermal tsara ...